Isreal Oo Dalkeeda Ka Xidhaysa Tv-ga Al-jazeera Iyo Sababta Keentay | Dhamays Media Group
Isreal Oo Dalkeeda Ka Xidhaysa Tv-ga Al-jazeera Iyo Sababta Keentay
Hargeysa (Dhamays) – Dawladda Israel ayaa doonaysa in ay xidho xafiiska Telefishanka Qatar laga leeyahay ee Al-Jazeera ku leeyahay dalkeeda, isla-markaana ay ruqsadda kala noqoto warfidiyeenka ka shaqeeya.
Wasiirka isgaadhsiinta, Ayuub Kara, ayaa ku eedeeyey TV-ga in uu taageero Argagixisada, waxaanu sheegay in labadiisa laamood ee Af-Carabiga iyo Af-Ingiriisiga ah labadaba la xidhayo.
Ra'isal wasaaraha Israel, Benjamin Netenyahu, ayaa ku eedeeyey Telefishanka in uu wado "isku dir", Aljazeera ayaa se cambaaraysay go'aankaa.
Dawladda Israel waxay sheegtay in ay go'aankeeda ku salaysay mid keeda la mid ah oo ay dalalkooda kaga mamnuuceen dhawr dal oo Carbeed oo Sunni ahi, iyadoo khilaaf diblomaasiyadeed soo dhex galay dalalkaas iyo Qatar oo ah dalka maal geliya Aljazeera xaruntiisuna tahay.
Netenyahu ayaa qoraal uu ku qoray bogga uu ku leeyahay Twitter-ka ugu hambalyeeyey go'aankaa uu ku mamnuucay Aljazeera waxaanu yidhi "Waan u hambalyeynayaa wasiirka oo amarkii aan siiyey fuliyey oo talaabo adag ka qaaday Aljazeera-da isku dirka wada".
Mid ka mid ah masuuliyiinta Aljazeera oo jooga xarunta dalka Qatar ee Dooxa, ayaa wakaaladda wararka ee AFP u sheegay in "TV-gu aad uga xun yahay go'aanka ay gaadhay dawladda lagu sheego ta keliya ee dimuqraadiga ah ee ku taal Bariga Dhexe, isla markaana u arko talaabadaa ay qaaday mid khatar ah".
Netenyahu ayaa hore ugu eedeeyey Tv-gan in uu hurinayo xiisadda haatan ka taagan goobta barakaysan ee ku taal magaalada Quddus ee Muslimiintu u yaqaanaan Xaram al-Shariif, Yuhuuduna tidhaa Temple Mount.
Ka Sakow, waxa ay Dawladda Israel ku sababaysay Xayiraadda ay saartay Telefiishanka Caalamiga ah ee Al-jazeera, waxa jiray Barnaamij Baadhitaan ah oo Al-jazeera ku soo bandhigtay faro-gelin Israel ku hayso Ingiriiska, taasi oo gaadhsiisan in Israel doonayso in Xilka laga qaado Wasiirro ka mid ah Dawladda UK.
Barnaamijkan oo Magaciisu yahay The Lobby ayaa Al-jazeera ku soo bandhigaysaa Arrimo xaasaasi ah oo loo malayn karo inay yihiin waxa Israel ku khasbay inay Dalkeeda ka Mabnuucdo Al-jazeera.
Previous: Wasiirka Maaliyadda Oo Shahaado-Sharaf Lagu Maamuusay + SAWIRRO
Next: TALYANLE: Xildhibaan Sheegtay Guddoomiyaha Golaha Wakiillada